Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Tsogo Sun dia nanitatra ny serivisy fampiantranoana fizahan-tany any Mozambika
Tsogo Sun dia nanitatra ny serivisy fampiantranoana fizahan-tany any Mozambika
Tsogo Sun, trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny any amin'ny faritra afrikanina atsimo, dia manitatra ny fampiasam-bolany any atsimon'i Afrika amin'ny alàlan'ny fanokafana fotodrafitrasa vaovao ao Maputo renivohitra Maputo.
Miorina any Afrika atsimo, ny faribolan'i Tsogo Sun dia nanitatra ny fampiasam-bolany tao an-drenivohitra renivohitra Mozambika tamin'ny fananganana trano fandraisam-bahiny vaovao mitentina R220 tapitrisa (US $ 17 tapitrisa), ny "StayEasy Maputo", roa kilometatra monja miala ny haitraitran'ilay vondrona Hotely Southern Sun Maputo, misy efitrano 269.
"Ny fananganana ny trano fandraisam-bahiny vaovao misy efitra 125 dia natomboka tamin'ny tapaky ny volana aprily 2017 ary kasaina vitaina hatramin'ny aprily 2018," hoy i Mark Boyd, talen'ny fampandrosoana ho an'ny hotely Tsogo Sun.
"StayEasy Maputo dia amina toerana mahafinaritra, ary tafiditra ao anatin'ny fampivelarana ny fampiasa an-tsokosoko, tsy isalasalana fa ho be mpitia amin'ireo mpanao raharaham-barotra sy mpizahatany miala sasatra mitady ny toerana tsara indrindra sy farany amin'ny sehatra marika misy toekarena", hoy i Boyd.
Ireo hotely Tsogo Sun ireo dia samy manana ny toerana misy azy eo amoron'ny ranomasina any amin'ny Bay of Maputo, roa kilometatra monja ny elanelan'ny Avenida da Marginal. Ny MapEasy Maputo dia haorina eo ambonin'ny Baia Mall vaovao izay eo am-pananganana azy izao, ary miorina amin'ny ampahan'ny làlam-pirenena Automoval Touring Clube de Maputo.
"Ny fotoana dia mety hampiakarana ny dian-tongotra eto amin'ity toerana fizahan-tany faratampony ity, izay manintona ireo mpandeha iraisampirenena sy eo an-toerana miaraka amin'ny toetrandro tropikaly, ny toerana mahafinaritra, ny morontsiraka volamena, ny kolontsaina maro karazana, ary ny sakafo mahasarika", Chief Executive Officer of Tsogo Sun Marcel von Aulock hoy izy.
Nanampy izy fa ny toekaren'i Mozambika izay nitombo dia nandray anjara tamin'ny fanapahan-kevitry ny vondrona hanatsara ny fampiasam-bolany ao Maputo.
"Miorina tsara ao an-tanàna izahay, azonay ny tsena ary faly izahay fa afaka nanararaotra nanararaotra ireo fitomboana ireo", hoy izy.
"Tsogo Sun dia mitazona ny fahalianany amin'ny fananany ary manolo-tena hiantoka ny trano fandraisam-bahiny hijanona ho manan-danja, vaovao ary mifaninana iraisam-pirenena," hoy i von Aulock.
"Ary ny tolotra rehetra ao anaty trano fandraisam-bahiny dia lakilen'ny fanatanterahana ny tanjontsika hamorona traikefa lehibe ho an'ireo vahininay. Mino izahay fa ity hotely ity dia hisintona antso fanampiny ho an'ny toerana mahaliana ao ambonin'ny toeram-pivarotana vaovao iray maresaka - ary manantena ny hahita azy io ho lasa toeran-tseraseran'ny safidy mpandeha eto izahay ”, hoy i Aulock.
Ireo mpamorona ny ivontoerana fiantsenana Baia Mall dia tohanan'ny mpanam-bola amin'ny tsena fitomboana, Actis, miaraka amin'ny consortium an'ny mpampiasa vola maorisiana ary ATCM (Automovel & Touring Clube de Mozambique) ho mpiara-miasa eo an-toerana.
Ny RPP Developments dia manatanteraka ny asa fitantanana fampandrosoana ho an'ny consortium ary niara-niasa tamim-pahombiazana tamin'ny Southern Sun Maputo Limitada hamolavola ny Stay Easy Maputo Hotel.
Mora dia mora kokoa ny mandeha mankany Maputo avy any Afrika Atsimo satria mahazatra ny sidina avy any Johannesburg sy Durban ary maharitra adiny iray.
Ny portfolio-n'i Tsogo Sun dia misy hotely mihoatra ny 100 sy toera-pifandraisana 14 sy fialamboly manerana an'i Afrika Atsimo, Afrika, Seychelles ary Abu Dhabi.
Ao Tanzania dia manana sy miasa ny hotely Tsogo Sun ny hotely Southern Sun Dar es Salaam, hita eo afovoan'ny renivohitra ara-barotra any Tanzania, ao amin'ny faritra tsara tarehy izay misy koa ny Botanical Gardens malaza.
The Southern Sun Hotel any Dar es Salaam dia manolotra maoderina misy ao, ampiarahina amin'ny hatsaran-tarehy taloha sy ny antso ambony afrikana exotic. Miorina tsara eo akaikin'ny birao diplaomatika sy ny mari-pamantarana hafa ao an-tanàna, manome hotely fidirana mora foana amin'ny mpitsidika an'i Dar es Salaam malaza indrindra ity hotely ity manintona eo an-toerana, izay misy ny Zoo Dar es Salaam, ary ny Nosy Mbudya sy Bongoyo.